Hoggaanka al-Shabaab oo isku qilaafsan ku biiridda Daacish
Muran xoog leh ayaa soo kala dhex galay hoggaanka sare ee al-Shabaab kaas oo ku saabsan in ay kooxdu ka sii mid ahaato al-Qaacida ama ay ku biirto ururka Daacish ama ISIS.
Koox uu hoggaaminayo Mahad Karate oo ah madaxa sirdoonka al-Shabaab iyo rag kale oo ajnabi ah ayaa u ololeynaya ku biiridda ISIS, halka kuwo kalena ay aaminsanyihiin in arrinkaasi uu dhibaato hor leh kooxda u keeni karo. Mahad Karate oo ah nin xukun jaceyl uu dardaray ayaa sababta kaliya ee uu u rabo in kooxdu ku biirto ISIS ay tahay in uu saaxiibo ajnabi kasbado si uu mucaaradkiisana uga takhaluso, una hanto amiirnimada kooxda al-Shabaab.
Ragga diidan in kooxdu ay ku biirto ISIS oo uu ugu horreeyo Axmed Diiriye oo ah amiirka haatan ee kooxda al-Shabaab ayaa qaba in kooxdu ay ka sii mid ahaato dallada al-Qaacida ee uu loolanka kala dhaxeeyo ISISta indhaha caalamka soo jiidatay. Diiriye qudhiisu dan kama laha dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu marin habaabiyay ee damaciisa koowaad waa sidii uu booskiisa iyo hantida uu boobka ku helay uga ilaashan lahaa ragga u soo hanqaltaagaya ee raba in al-Shabaab ay jid cusub qaaddo.
Ama ISIS ha ku biiraan am al-Qaacida ha ka sii mid ahaadaan, waxaan cidna is weydiineyn in Shabaabku ay yihiin koox gabalkeedu dhacay oo Soomaaliya ka micna beeshay kadib markii si weyn looga adkaaday, dhulalkii ay heysteen ee dakhliga ka soo gali jireyna laga xorreeyay.
Horjooge kale oo al-Shabaab ah oo duqeyn dhanka cirka ah lagu dilay
Weerar loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan ‘Drones’-ka ayaa lagu lagu dilay horjooge sare oo al-Shabaab ka tirsaaa.
Duqeynta waxaa lala beegsaday gaari marayay meel u dhow magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Wararka laga helayo gobolka ayaa sheegaya in gaarigaas la bartilmaamadeystay uu saarnaa Aadan Garaar oo ka mid ahaa horjoogeyaasha sarsare ee Al-Shabaab, waxaana la rumeysan yahay in gaariga ay la saarnaayeen saraakiil kale oo ka tirsan kooxdaas.
Aadan Garaar ayaa dhanka abaabulka ugu qaabilsanaa kooxda al-Shabaab, iyadoo la aaminsan yahay in uu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay weeraro badan oo shacab Soomaaliyeed lagu xasuuqay iyo waliba kii lagu qaaday xarunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi sanadkii 2013-kii kaas oo lagu dilay in ka badan 60 qof.
Afhayeen u hadlay dowladda Soomaaliyeed ayaa sheegay in dilka Aadan Garaar uu yahay jab weyn oo soo gaartay al-Shabaab, waxuuna xusay in ay dowladdu sii wadi doonto duqeymaha noocaan oo kale ah ee lagu ugaarsanayo madaxda argagixisada ah ee dhagaha ka xirtay baaqii dowladda ee ahaa in inta ay goori goor tahay ay isi soo dhiibaan, kana waantoobaan falalka xasuuqa ah ee ay kula kacayaan dadka Soomaaliyeed iyo dadyowga kale ee la deriska ah.
21 qof oo looga shakiyay al-Shabaab oo lagu xiray Beled Xaawo
Ciidanka ammaanka ee degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaas ku soo qabtay 21 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-Shabaab.
Taliyaha ciidanka amniga degmada Beled Xaawo, Cismaan Koofi ayaa sheegay in howlgalka ay ku soo qabteen hub kala duwan, wuxuuna xusay in ay fuliyeen howlgalka kaddib markii lagu wargeliyay in xubno ka tirsan al-Shabaab ay soo galeen degmada si ay u carqaladeeyaan nabadgelyada.
Koofi ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay baaritaan ku sameynayaan tuhmaneyaasha, iyadoo kuwa dambiga lagu helo loo gudbin doono maxkamadda si sharciga loo marsiiyo, halka kuwa aan waxba galabsan-na la iska sii dayn doono. Ganacsatada iyo dadka kale ee heysta hubka ayuu tilmaamy in looga baahan yahay inay soo diiwaangeliyaan si loo xaqiijiyo amniga guud ee degmada.
Taliyaha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu bar-tilmaameedsanayo dadka looga shakisan yahay falalka nabadgelyo-darrada, wuxuuna u jeediyay shacabka inay kala shaqeeyaan ciidanka sidii loo sugi lahaa ammaanka.
Waxaa muuqata in argagixisada loo diidan yahay haba yaraatee fursad ay iyagoo dhuumaaleysanaya ku soo galaan degaannada laga xorreeyay maadaama ay haatan dowladda iyo dadkeedu ay si weyn u wada shaqeynayaan.
Culimada Soomaaliyeed oo mar kale cambaareeyay al-Shabaab
Culimaa’udiinka Soomaaliyeed ee ku mideysan Hey’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa mar kale si weyn u cambaareeyay falalka xasuuqa ah ee ay Shabaabku kula kacaan dadka rayidka ah ee aan wax dhib ah galabsan.
Cambaareyntan dambe ayaa timid kadib markii Shabaabku ay dad isku qoys ah oo ka koobnaa dhawr nin, xaasaskooda iyo caruurtooda ay ku dileen degaano ka tirsan Gobollada Gedo iyo Shabeellaha Hoose. Culumada ayaa sheegay in Shabaabku ay caadeysteen xasuuqa shacabka, waxaana ay ku tilmaameen dilalkii ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Sh/Hoose iyo tuulo hoostagta degmada Luuq ee gobolka Gedo ay yihiin kuwo ka baxsan diinta Islaamka.
Culimada ayaa intaa ku daray in ay waajib tahay in argagixisada lala dagaallamo oo dalkoo idil laga cirib tiro waayo waa kuwo diinteenna saliimka ah ka been sheega oo waxa ay u dagaallamayaan ma ahan mid diinta Islaamka ay shaqo ku leedahay ee waa mid u adeegeysa danta kooxo shisheeye ah oo dalka iyo dadka cadow ku ah.
Shuyuukhda Soomaaliyeed ee diinta ku xeel dheer ayaa sheegay in sida kaliya ee Shabaab looga adkaan karo ay tahay in shacabka iyo dowladda ay si wadajir ah ula dagaallamaan argagixisada, isla markaana loogu tago meelaha howdka ah ee ay ku dhuumaaleysanayaan.